सरकार र डा. गोविन्द केसीको वार्ता बुधबार पनि निष्कर्षविहिन | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
सरकार र डा. गोविन्द केसीको वार्ता बुधबार पनि निष्कर्षविहिन
प्रकाशित मिति १० श्रावण २०७५, बिहीबार ०५:४० लेखक नेपाली जनता
काठमाडौँ । सरकार र अनशनरत प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीको वार्ता बुधबार पनि विना निष्कर्ष टुंगिएको छ । सिंहदरबारस्थित शिक्षा मन्त्रालयमा भएको दुई पक्षबीचको वार्ता असफल भएको हो ।
डा.गोविन्द केसी पक्षले आफ्नो मागका बारेमा सरकार जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत नभएको आरोप लगाएको छ । केसीको वार्ता टोलीले आफूहरुको २२ बुँदे सूचीका आधारमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास गर्ने प्रतिवद्धता आएपछि मात्र वार्तामा बस्ने बताएको छ । सरकारले भने राजनीति भएका कारण डा. केसीसँगको वार्ता असफल भएको जनाएको छ ।
वार्ताबाट बाहिरिए लगत्तै डा.केसी पक्षधरले विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले आफ्ना मागहरुको बेवास्ता गरेको भन्दै डा.केसीको स्वास्थ्य असाध्य नाजुक भइसक्दा पनि सरकारी पक्ष चरम गैर जिम्मेवार र संवेदनविहीन हुँदै विधेयक सम्बन्धी दफागत छलफलमा सार्थक रुपमा प्रवेश नगरेको आरोप लगाएको छ ।
वार्ताका लागि सरकार पक्षका नेकपाका संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले मध्यस्थताको भूमिका निर्वाह गरेका थिए, जसले सरकार र डा. केसीको सम्वादहीनता अन्त्य गर्न पहल गरेका थिए । तर, नेता नेम्वाङले विधेयक संसदको विषय भएको बताएपछि सरकारी टोलीले सहमति दिन सकेन ।
डा केसीको ७ बुँदे मागको पहिलो नम्बर बुँदामा नै चिकित्सा शिक्षा विधेयकको विषय छ। जसमा काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्ष नयाँ मेडिकल कलेज नखोल्ने, एउटा विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने, सम्बन्धनका लागि ३ सय शय्याको अस्पताल कम्तीमा ३ वर्षसम्म सञ्चालन भएको हुनुपर्ने, सरकारी मेडिकल कलेजमा ७५ प्रतिशत सिट निःशुल्क हुनुपर्ने लगायतका विषय छन्। सरकार र केसी पक्षबीच मंगलबार भएको वार्ता केही सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढेपनि बुधबारको वार्तामा कुनै ठोस प्रगति हुन सकेन ।
काँग्रेस र विवेकशीलका कारण वार्ता भाँडियो !
गोविन्द केसीका प्रतिनिधि र सरकारी प्रतिनिधि बीचको वार्ता कांग्रेस र विवेकशील साझा पार्टीले भाँडेको स्रोतले जनाएको छ ।
मंगलबारको वार्तामा केसी र सरकार पक्षबीच ७ बुँदे सहमति भएको थियो । मंगलबारको वार्तापछि कांग्रेस नेता गगन थापा, विवेकशील साझाका सुरेन्द्र भण्डारी र ओम अर्यालको होटेल क्रिष्टल थापाथलीमा बैठक बसेको स्रोतको दाबी छ । सरकारसँग भएको सहमति नमान्ने निश्कर्ष उनीहरुले मंगलबार नै निकालेका थिए ।
बुधबारको वार्तामा केसीका तर्फबाट सहभागी डा. जीवन क्षत्री र डा. अभिषेक सिंह लचिलो रुपमा प्रस्तुत भएका थिए । तर, विवेकशील साझाका ओम अर्याल र सुरेन्द्र भण्डारीले भने मंगलबारको सहमति कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियाका विषयमा विवाद झिकेको वार्तामा सहभागी सरकारी पक्षका एक सदस्यले बताए ।
सरकारका तर्फबाट ७ बुँदे सहमति अनुरुप विधेयक संसदमा गइसकेकाले सहमति अनुरुपको संशोधन गर्न लचकता प्रस्तुत गरिएको थियो । विधेयकमाथि संशोधन गर्ने क्रममा संशोधन प्रस्ताव मार्फत केसीका माग अघि बढाउन विवेकशील साझाका प्रतिनिधिहरु सहमत नभएको बताइन्छ ।
मेलम्चीको ठेक्का रद्द, आयोजना थप अन्यौलमा
काठमाडौं । सरकारले इटालियन कम्पनी सिएमसीसँग बहुचर्चित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेक्का तोडेको छ । आर्थिक रूपमा टाट पल्टिएको स्वघोषणा…
काठमाडौं । मलेसियाले नेपाली श्रमिक पठाउने क्रम सुचारु गर्न पुरानै संरचना प्रयोग गर्नुको विकल्प नभएको निष्कर्ष सुनाएको छ ।…
पाठक घुस प्रकरण: अदालतमा ठेकेदार भट्टको चलखेल
काठमाडौं । सुरक्षा निकायमा हतियारलगायतका ठेक्का लिने ठेकेदार दिपक भट्ट पछिल्लो समयमा अदालतमा मुद्दाका विचौलिया बन्न थालेका छन् ।…
उपप्रधानमन्त्री यादवलाई वर्खास्त गर्न फोरमकै माग
काठमाडौं । दुई तिहाईको सरकारका उपप्रधान एवम् स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादव र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबीच खटपट शुरु…
समाजवादउन्मुख अर्थ व्यवस्थाको आधारस्तम्भ श्रमिक मजदुर: राष्ट्रपति भण्डारी
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारले लिएको सामाजिक न्याय र समानतामा आधारित समृद्ध नेपालको साझा सङ्कल्पलाई सार्थक तुल्याउन…